အပြင်ပဲသွားသွား၊ ရုံးပဲတက်တက် စမတ်ကျစေမယ့် ရှပ်အင်္ကျီဖက်ရှင်အိုင်ဒီယာများ
မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဖက်ရှင်တွေထဲက ဘယ်တော့မှ ရိုးမသွားတဲ့ shirt fashion လေးတွေက ဝတ်ရတာလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ စမတ်ကျတဲ့ ဖက်ရှင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး shirt တွေကို ဟိုးအရင်ကတည်းက ဝတ်ဆင်လာကြသလို ဒီနေ့အထိလည်း ဆန်းသစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဝတ်ဆင်ကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးသွားလို့လည်း အဆင်ပြေသလို၊ အပြင်တွေသွားတဲ့ အခါမှာလည်း စမတ်ကျလှတဲ့ shirt fashion လေးတွေကို ပျိုမေလေးတွေ အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်နော်။ Shirt လက်ရှည်နဲ့ White Jeans Shirt လက်ရှည်လေးကို ဘယ်လိုပုံစံပဲ ဝတ်ဝတ် စမတ်ကျ သတ်ရပ်နေမှာ အမှန်ပါ။ ဒီလက်ရှည်လေးကိုမှ white jeans လေးနဲ့ တွဲဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အရမ်းကို …
“အမေများနေ့မှာ ကိုယ်တိုင်သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ အမေတွေအတွက် ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး”
ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီလ (၉)ရက်နေ့ (ပြာသိုလပြည့်နေ့)လေးကတော့ အမေများနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ အမေများနေ့လေးမှာတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် အဆိုတော် နန်းဆုရတီစိုးကတော့ သူ့ရဲ့ အမေအတွက်ကို သူကိုယ်တိုင်သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေးထားပါသေးတယ်။ ဒီသီချင်းလေးကိုတော့ နန်းဆုရတီစိုးနဲ့ အတူ အဆိုတော်မင်းရတုပိုင်တို့က သီဆိုထားတာဖြစ်ပြီး သီချင်းလေးရဲ့ နာမည်ကတော့ “မေမေချမ်းမြေ့ပါစေ”လို့လည်း အမည်ပေးထားပါတယ်။သီချင်းလေးကိုတော့ နာမည်ကြီး တေးရေးဆရာဖြစ်တဲ့ တေးရေးနောင်နောင် (SF)ကရေးစပ်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သီချင်းလေးထဲမှာတော့ သားသမီးတွေအပေါ်ထားရှိတဲ့ အမေတွေရဲ့ မေတ္တာတရားနဲ့ အရာရာတိုင်းမှာ သားသမီးတွေရှေ့ကမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးတဲ့ အကြောင်းလေးကို ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နန်းဆုကလည်း သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ “အမေများနေ့မှာ နန်းဆုရဲ့ မေမေချမ်းမြေ့ပါစေ သီချင်းလေးနဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အမေများအားလုံးအတွက် ဆုတောင်းဂါရဝပြုလိုက်ပါတယ်”အမေများနေ့မှာ အမေတွေအတွက်တောင်းဆုပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရေ နန်းဆုရဲ့ “မေမေ …
အမေရိကန်စစ်သားများ မိသားစုအား နှုတ်ဆက်နေပုံများ
အမေရိကန်စစ်သားများ မိသားစုအား နှုတ်ဆက်နေပုံများ အမေရိကန်-အီရန်တင်းမာမှုဟာ အခုဆိုရင် စစ်ကြီးအဖြစ် စတင်လိုက်ပြီလို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြနေကြပါပြီ …။ အကြောင်းကတော့ အီရန်လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ အပြီးမှာ အီရန်က အီရက်မှာ အခြေစိုက်ထားတဲ့ အမေရိကန်တပ်စခန်းတွေအနက် (၂)ကို ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် …။ အီရန်ဟာ ဒုံးကျည်အစင်း (၃၀)နဲ့ အမေရိကန်ကို စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန်မှာ ဒီအတွက် အမြန်တုန့်ပြန်ဖို့ တံခါးပိတ်အစည်းအဝေး လုပ်နေတယ်လို့ စစ်ဘက်က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် …။ လက်တလောတော့ ကန်ဘက်က အကျအဆုံး ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ မထုတ်ပြန်သေးပါဘူး …။ သိရသလောက်တော့ အီရန်ဟာ al-Asad နဲ့ Erbil ရှိ လေတပ်စစ်အခြေစိုက် အခြေစိုက်စခန်း (၂)ခုကို …
“၃(က)ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာ အတင်းကြီးလုပ်မယူပဲခံစားရတဲ့အခန်းတွေပါတယ်ဆိုတဲ့ ဇဏ်ခီ”
ရိသတ်တွေရဲ့အသည်းကျော် မင်းသားချော ဇဏ်ခီကတော့ လက်ရှိရုံတင်ပြသနေဆဲဖြစ်တဲ့ ၃(က) ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာ အတင်းကြီးလုပ်မယူပဲခံစားရတဲ့အခန်းတွေပါတယ် လို့ ချီးကျူးထားပါတယ်။ ဇဏ်ခီဟာ ၃(က)ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာ တစ်ချိန်က သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ “မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို Hollywood ကနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက် ချီးကျူးစကားဆိုခဲ့တာကို အမှတ်ရခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဇဏ်ခီကတော့ “မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို Hollywood ကနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက် ချီးကျူးစကားဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းကို “အခုပဲကြည့်ခဲ့ပါတယ်..ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့…ကျနော်တို့ မုဒြာရဲ့ခေါ်သံကို Hollywood ကနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက် မြန်မာပြည်ရောက်နေတုန်း private screening လုပ်ပေးတော့ ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုသွားပြီးသတိရမိတယ်။ ဘာပြောလဲဆိုတော့ “It hasaheart” တဲ့။ သူဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်။ Hollywood ကလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားရဲ့ production level ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်။ …
ချိုင်းမည်းတာကို ခဲဖျက်နဲ့ဖျက်သလို ဖြူသွားစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း(၆)ခု
ချိုင်းမည်းတာကို ခဲဖျက်နဲ့ဖျက်သလို ဖြူသွားစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း(၆)ခု ချိုင်းသားညိုတာက အင်္ကျီလက်ပြတ်လေးတွေ ဝတ်တဲ့အချိန် သင့်ကို ယုံကြည်မှုမရှိဖြစ်စေပါတယ်။ လက်မြှောက်တဲ့အချိန်မှာလည်း ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ မမြှောက်နိုင်ပါဘူး။ ချိုင်းသားညိုတာကို ခဲဖျက်နဲ့ ဖျက်ပစ်သလို ဖြူသွားစေမယ့် အိမ်တွင်းသုံးနည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပါရစေနော် …. (၁) ပန်းသီးရှာလကာရည် ပါဝင်ပစ္စည်း ပန်းသီးရှာလကာရည် ၂ ဇွန်း မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ ၂ ဇွန်း ပါဝင်ပစ္စည်းနှစ်မျိုးကို ရောလိုက်ပါ။ အမြှုပ်လေးတွေထတဲ့အထိ မွှေလိုက်ပါ။ ပြီးနောက် ချိုင်းအောက်မှာလိမ်းပြီး ခြောက်တဲ့အထိထားပါ။ ရေဆေးချလိုက်ပါ …။ တစ်ပတ်မှာ သုံးကြိမ် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် …။ (၂) နှင်းဆီရည် ပါဝင်ပစ္စည်း နှင်းဆီရည် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ နှင်းဆီရည်နဲ့ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို အနှစ်လေးဖြစ်အောင် …
ပေါင်းဖက်ဖို့ အကောင်းဆုံး အိမ်ထောင်ဖက် နေ့နံများ….
ပေါင်းဖက်ဖို့ အကောင်းဆုံး အိမ်ထောင်ဖက် နေ့နံများ…. ” ဦး သာ စိန် ပန်း ဒန်းလှ ကို ရှာ ” ဦး-သာ တနင်္ဂနွေနှင့် သောကြာ အိမ်ထောင်ဖက် စိန်-ပန်း အင်္ဂါနှင့် ကြာသပတေး အိမ်ထောင်ဖက် ဒန်း-လှ စနေနှင့် ဗုဒ္ဓဟူး အိမ်ထောင်ဖက် ကို-ရှာ တနင်္လာ နှင့် ရာဟု အိမ်ထောင်ဖက် (အိမ်ထောင်ရန်ဖက်) ” ဓမ္မာ၊ သောက ၊ အင်းဝ၊ ရာဇာ ” ဓ မ္မာ – စနေနဲ့ ကြာသပတေး အိမ်ထောင်ဖက်ရန် မသင့် သော က – သောကြာနှင့် တနင်္လာ …
“သင့်လက်ကိုင်ဖုန်း မထားသင့်သောနေရာ (၁၀) ခု”
“သင့်လက်ကိုင်ဖုန်း မထားသင့်သောနေရာ (၁၀) ခု” သင်ဟာ လက်ကိုင်ဖုန်းကို ပုံမှန် အသုံးပြုနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေရင် တစ်နေ့ကို သင်ရဲ့ ဖုန်းနဲ့ထိတွေ့တဲ့အ ကြိမ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ကျော်ရှိတယ်ဆိုတာ သင် သိပါရဲ့လား။ တစ်ချိန်လုံး ဖုန်းအ သုံးပြုသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ထိတွေ့တဲ့ အချိန်က အဲဒီထက်တောင် ပိုနိုင်ပါသေး တယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေဟာ ယနေ့ ခေတ်အခါမှာ လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ အိမ်သာသွား ရင်တောင်မှ လက်ကိုင်ဖုန်းပါမှ လုံလောက် မယ်လို့ ပြောရမယ့် အခြေအနေပါပဲ … ။ သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းကို စနစ်တကျ အသုံးပြုရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မှု မရှိနိုင်ပေမယ့် ဖုန်းအသုံးပြုပုံ၊ အသုံးပြု နည်း မမှန်ကန်ရင်(ဥပမာ တစ်ချိန်လုံး …
“ဘိုကလေးကပရိသတ်တွေကို တွေ့ချင်လွန်းလို့ အလုပ်တွေကို အကုန်ရက်ရွှေ့ပြီး သွားရောက်ဖျော်ဖြေသွားမယ့် ပိုးကြာဖြူခင်”
ပရိသတ်တွေက “ဆိုင်းမိုင်”လို့ ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ကြတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ပိုးကြာဖြူခင်က လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားကဒေသတွေအထိသွားရောက်ပြီး ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာလည်း ဆိုင်းမိုင်လေးက ဘိုကလေးမြို့နယ်၊ပန်းပဲစု ၊ ကွင်းချောင်းလေးကျေးရွာမှာ သွားရောက်ဖျော်ဖြေဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကိုလာရောက်အားပေးကြဖို့ကို ဖိတ်ခေါ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်းမိုင်ကတော့ ကွင်းချောင်းရွာမှာ ပထမတစ်ကြိမ်သွားရောက်ဖျော်ဖြေဖူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုလို နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မံဖျော်ဖြေရဖို့ ဆန္ဒရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။”ဆိုင်းမိုင် ဇန်နဝါရီလ (၈) ရက်နေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကျရင် ဧရာဝတီတိုင်း ၊ဘိုကလေးမြို့နယ်၊ ပန်းပဲစု ၊ ကွင်းချောင်းလေးကျေးရွာ က နှစ်ထပ် ကျောင်းဆောင်သစ် ရေစက်ချအလှူအောင် ပွဲ မှာ သီချင်းတွေနဲ့ဖျော်ဖြေပါမယ်နော်။ ဒီရွာလေးကို နောက်တခေါက် ပြန်သွားချင်လွန်းလို့ တခြားအလုပ် တွေကို အကုန်ရက်ရွှေ့ပြီး တကူးတက သွားရောက်ဖျော်ဖြေ မှာပါ။”လို့ ဒီရွာလေးကပရိသတ်တွေကို …
အမြဲရယ်နေတတ်တဲ့သူတွေ၊ စကားများတဲ့သူတွေဟာ အထီးကျန်ဆန်လွန်းတဲ့သူတွေပါတဲ့နော် သင့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင်က အမြဲတမ်း ရယ်မောနေတတ်တဲ့သူတွေလား။ ဒါဆိုရင်တော့ အမြဲတမ်းရယ်နေတတ်တဲ့သူတွေ၊ စကားများတဲ့သူတွေဟာ အထီးကျန်လွန်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေပါတယ် … ။ ဒါကြောင့် အမြဲတမ်းရယ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ စကားအရမ်းများတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် သူများတွေထက်ပိုပြီး ဖေးမဖို့လိုတယ်ဆိုတာ သတိရလိုက်ပါနော် … ။ (1) စကားပြောဖော်မရှိဘူး.. အမြဲတမ်းရယ်မောနေတတ်တဲ့သူတွေ၊ စကားများတဲ့သူတွေဟာ လက်တွေ့ဘဝမှာ စကားပြောဖော်မရှိလောက်အောင်ကို အထီးကျန်ဆန်တဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ဘဝမှာ အမြဲတမ်းတစ်ယောက်တည်းပဲ ဖြစ်နေလေ့ရှိပြီး သူငယ်ချင်းဆိုတာတောင် ခပ်ရှားရှားရယ်ပါ … ။ ဒါကြောင့်ပဲ သူများနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ အထီးကျန်တာကို ခဏလောက်မေ့ချင်လွန်းလို့ ရယ်မောပြီး စကားတွေအများကြီးပြောနေရတာဖြစ်ပါတယ် … ။ (2) မွန်းကျပ်တယ်.. သူတို့စိတ်ထဲမှာ မွန်းကျပ်မှုတွေ အရမ်းများကြပါတယ်။ …
အမေ့ကို တန်ဖိုးထားသလို မိန်းမကိုလည်း တန်ဖိုးထားပါ …
အမေ့ကို တန်ဖိုးထားသလို မိန်းမကိုလည်း တန်ဖိုးထားပါ … ကျွန်တော် ကုတင်ပေါမှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက်မိတယ် … ။ အသင့်အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အားနွဲ့နွဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ နူးညံလှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော်သေချာ ကြည့်နေရင်းကနေ အတွေးတစ်ချို့ဝင်လာပြီး ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ ကျွန်တော့ဟာကျွန်တော် တွေးနေမိတယ် .. ။ မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုပါလိမ့် ? ကျွန်တော်နဲ့ မင်္ဂလာမ​ဆောင်ခင်​က မိဘ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အချစ်တွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု့အောက်မှာ နေပြီကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။ အခုကြ တစ်ချက်ထဲ ရုတ်တရက်မှာပဲ သိတောင်မသိထားတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဘေးမှာ အမိန့်နာခံရင်းနဲ့ အိပ်စက်နေရပြန်တယ် ။ ကျွန်တော့ကြောင့် တစ်သက်လုံး အတူနေလာတဲ့ မိဘ​တွေကိုစွန့့့်ခွာလာတယ်​။ ကျွန်တော့ကို ပင်ပင်ပန်းပန်းပြုစုပြီးရင် …
This Month : 46629
This Year : 100712
Total Users : 395845
Total views : 1427923